Qisada Askari Noqday Ciyaartoy Oo Dunidu La Yaabban tahay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qisada Askari Noqday Ciyaartoy Oo Dunidu La Yaabban tahay
(06-07-2017) Askari reer Ghana ah oo waardiye u ahaan jiray kooxda xulka Qaranka ayaa BBC-da u sheegay in uu ugu dambeyntii u ciyaaray kooxdaasi ciyaar caalami ah, isagoo taasi ku tilmaamay “Riyo u rumowday”.
Samuel Sarfo wuxuu markii ugu horreysay u ciyaaray kooxda Black Stars (Xidigaha Madow), wuxuuna bedel ku soo galay daqiiqaddii 81-aad, kulankaas oo Ghana ay Mareykanka kaga badisay 2-1.
26 sano jirkan, wuxuu ka ciyaaray dhexda, kullankaasi saaxiibtinimo. Sarfo wuxuu BBC-da u sheegay in uu doonayo inuu noqdo xirfadle.
Wuxuu sheegay inuu la soo barbaaray Sports Nishat Ladha, halkaas ay ku sugnaayeen inta badan ciyaartoyda qaranka, ayna ku taageereen isaga , gaar ahaan kabtanka Asamoah Gyan oo ku dhiiragaliyay inuu sii wado shaqada adag.
Sarfo waxaa markii ugu horreysay kooxda ugu saftay kullan ka mid ahaa tartanka isreeb-reebka Horyaalka Afrika oo xulkiisa uu la ciyaarayay Itoobiya bishii June. Wuxuu sheegay inu waligiisba ku riyoon jiray inuu mar uun u dheela kooxda qaranka
“Waxay ahayd riyo ii rumowday. Waa riyada qofkastoo dhallinyaro oo ku koray Gahan uu qabo“
Wuxuu sheegay in ciyaaryahanka dhexda ka ciyaaro Emmanuel Agyemang-Badu, kaas oo lala sawiray sanadkii tagay asigoo xiran dharka booliska markii uu waardiyaha ahaa in uu aad u taageeray, inkastoo Agyemang-Badu uusan hadda kooxda ka mid ahayn”.